မကြာခင်မှာလမ်းခွဲခံရတော့မယ်ဆိုတာ ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးသိနိုင် – Trend.com.mm
Posted on June 24, 2018 June 19, 2018 by San Wadi Hnin
လမ်းခွဲခံရတော့မယ့်အခြေအနေဟာဘယ်လိုပါလိမ့်။ လမ်းခွဲခံရခြင်းဆိုတာ ကြည်လင်နေတဲ့မိုးကောင်းကင်ကြီးက ရုတ်တရက်အနီရောင်ပြောင်းသွားပြီး လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကျရောက်လာတဲ့ခံစားမှုမျိုးလား။ဒါမှမဟုတ် မနေ့ကအထိ ကူးခတ်ဆော့ကစားနေတဲ့ ရွှေငါးလေးဟာ ဒီနေ့မနက်မှာ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ပေါလောပေါ်နေတာတွေ့လိုက်ရတဲ့အငွေ့အသက်မျိုးဖြစ်မလား။ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းဝင်လာတဲ့ ထောင့်ကန်ဘောကိုမကာကွယ်နိုင်လိုက်တဲ့ဂိုးသမားရဲ့ ကျင့်သားရနေတဲ့ သွေ့ခြောက်ကျိန်းစပ်တဲ့မျက်ဝန်းညိုတွေဖြစ်မလား။လမ်းခွဲခံရတယ်ဆိုတာ မုန်တိုင်းတစ်ခုထက်ပြင်းရှတဲ့သက်ရောက်မှုမျိုးဖြစ်ပေမယ့် မုန်းတိုင်းတစ်ခုထက်တော့ပိုပြီိး အရိပ်အယောင်ပြတတ်ပါသေးတယ်။ လမ်းခွဲမခံရခင်တွေ့ရတတ်တဲ့အရိပ်အယောင်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအကြောင်းဆို အူမချေးခါးမကျန်စိတ်ဝင်တစားသိချင်ကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ဒါပေမယ့််တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မချစ်တော့တဲ့အခါ သူနဲ့ပက်သက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းမသိလိုက်မသိဘာသာဖြတ်သန်းနေမိပါလိမ့်မယ်။ စကားတွေအကြာကြီးမပြောဖြစ်တော့သလို သင်ကပြောဖို့ကြိုးစားလည်း သူကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာရှောင်လွှဲပါလိမ့်မယ်။သင်နဲ့စကားပြောဖို့တောင်စိတ်မဝင်စားတော့တဲ့သူဟာ သင့်ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်နိုင်ပါဦးမလား။
သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခင်ရင် မေးကြည့်ပါ။သင့်အကြောင်းတွေဘာပြောသေးလဲလို့.. မကောင်းတာတွေ၊သင်ကချုပ်ချယ်လို့စိတ်ညစ်ရတာတွေပြောနေသေးရင်စိတ်မပူပါနဲ့ သူသင့်ကိုစိတ်မကုန်သေးပါဘူး။သင့်ကိုလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီိးတဲ့သူကတော့ စကားထဲကိုထည့်ပြောတော့မှာမဟုတ်လို့ပါ။ အမှန်တကယ်စိတ်ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။
သူ့စိတ်ကလွန်ဆွဲနေတာပါ။ သင့်ကိုသစ္စာရှိချင်တဲ့စိတ်ရယ်၊မချစ်တော့တဲ့စိတ်ရယ်။ဒါမှမဟုတ် သူသင့်ကိုိမချစ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသူ့ကိုယ်သူမသိသေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်အပေါ်မှာစ်ိတ်မရှည်တော့ဘူး အရင်ကသည်းခံခဲ့တာလေးတွေကိုတောင် အပြစ်ကြီးတစ်ခုလိုမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ သူသင့်ကိုလမ်းခွဲတော့မှာသေချာပါတယ်။
သူကလမ်းခွဲမယ့််အရိပ်အယောင်တွေပြလို့သင်က desperate ဖြစ်ပြီး ဆွဲထားလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့သင်ကအောက်ရောက်သွားပါပြီိ။ဒါကြောင့် သူ့အနေနဲ့သင့်ကိုလက်ခုပ်ထဲကရေလို မှောက်လိုမှောက်လှန်လိုလှန်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီး လုံးဝကိုလေးစားမှုရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့မှသနားလို့ဆက်တွဲတယ်ဆိုရင်လည်း သင်ကတစ်ဘဝလုံးအောက်စည်းကဖြစ်နေတော့မှာပါ။ သူသင့်ကိုလိုအပ်တာထက် သင်ကသူ့ကိုပိုလိုအပ်နေမိတာကိုး။
သင့်ချစ်သူကဆရာကြီးဆိုရင်တော့ သင့်ဘဝဟာမတွေးရဲစရာပါပဲ။သူကသင့်ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ပုံပြပြီးချစ်လွန်းလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သင့်ကိုချုပ်ချယ်တာတွေအပြစ်ရှာတာတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာသဝန်တိုတာတွေလုပ်ပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်တွေတရစပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီး သင်က မခံနိုင်တော့လို့လမ်းခွဲစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင် သူဆင်တဲ့အကွက်ထဲဝင်သွားတော့မှာပါ။ သူကသင့်ကိုသိပ်ချစ်ပေမယ့် သင်ကသူ့ကိုထားခဲ့တာပါပေါ့။သင်ကပဲလူဆိုးမကြီးပေါ့။ For the record, you are the one who teared his heart apart and obviously he’s the victim.ပေါ့။ ဒီ့ထက်ဆိုးတဲ့သူဆိုဒီထက်မြင့်တဲ့အကွက်တွေလာဦးမှာပါ။ ဒီကိစ္စတွေကသိပ်ကိုခက်ခဲနက်နဲပါတယ်။သတိပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောတဲ့ ဆရာကြီးတွေကိုမတွဲပါနဲ့။
ဒီအချက်တွေကတော့ သင့်ကိုမကြာခင်လမ်းခွဲပြီးထားပစ်ခဲ့တော့မယ့်သူတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့အချက်တွေပါ။ သင်ကတော့ တကယ်ချစ်တာဖြစ်ပြီး လမ်းခွဲဖိုိ့မြူတစ်မှုန်စာလောက်မှမတွေးမိရင်တောင် သူတို့ဘက်မှာသင့်ကိုဘယ်နှစ်လပဲတွဲမယ်ဆိုတာ စီမံကိန်းချထားပြီးသားဖြစ်ရင်ဖြစ် မဟုတ်ရင်လည်း သင်နဲ့တွဲနေရင်းနဲ့မှ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် လမ်းခွဲဖိုိ့စိတ်ကူးပေါ်လာတဲ့အခါ အများစုက ဒီအချက်တွေအတိုင်းလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သူတုို့ကလမ်းခွဲစကားမပြောခင် ကိုယ်ကအရင်ပြောပြီး ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေကိုပျော်ပျော်ကြီးလမ်းခွဲထားပစ်ခဲ့နိုင်ကြပါစေ။ Fighting!!!!!!! Aja Aja! Parshar!
လမြးခှဲခံရတော့မယြ့အခှအနေဟောဘယလြိုပါလိမြ့။ လမြးခှဲခံရခှငြးဆိုတာ ကှညလြငနြတေဲ့မိုးကောငြးကငကြှီးက ရုတတြရကအြနီရောငပြှောငြးသှားပှီး လပှငြေးမုနတြိုငြးတှကရွေောကလြာတဲ့ခံစားမှုမွိုးလား။ဒါမှမဟုတြ မနကေ့အထိ ကူးခတဆြော့ကစားနတေဲ့ ရှငေါးလေးဟာ ဒီနမေ့နကမြှာ ရမကွေနြှာပှငပြေါပြေါလောပေါနြတောတှလေို့ကရြတဲ့အငှအေ့သကမြွိုးဖှစမြလား။ မကွစြိတစမြှိတအြတှငြးဝငလြာတဲ့ ထောငြ့ကနဘြောကိုမကာကှယနြိုငလြိုကတြဲ့ဂိုးသမားရဲ့ ကငွ့သြားရနတေဲ့ သှခှေ့ောကကြွိနြးစပတြဲ့မကွဝြနြးညိုတှဖှစေမြလား။လမြးခှဲခံရတယဆြိုတာ မုနတြိုငြးတစခြုထကပြှငြးရှတဲ့သကရြောကမြှုမွိုးဖှစပြမယြေ့ မုနြးတိုငြးတစခြုထကတြော့ပိုပှီိး အရိပအြယောငပြှတတပြါသေးတယြ။ လမြးခှဲမခံရခငတြှရေ့တတတြဲ့အရိပအြယောငတြှကေိုဖောပြှပေးလိုကပြါတယြ။
ကိုယခြစွတြဲ့သူအကှောငြးဆို အူမခွေးခါးမကနွစြိတဝြငတြစားသိခငွကြှတဲ့သူတှခညြွေးပါပဲ။ဒါပမယြေ့တြဖှညြးဖှညြးနဲ့ မခစွတြော့တဲ့အခါ သူနဲ့ပကသြကတြဲ့အရာတှကေိုလညြးမသိလိုကမြသိဘာသာဖှတသြနြးနမေိပါလိမြ့မယြ။ စကားတှအကှောကှီးမပှောဖှစတြော့သလို သငကြပှောဖို့ကှိုးစားလညြး သူကအကှောငြးအမွိုးမွိုးပှကာရှောငလြှဲပါလိမြ့မယြ။သငနြဲ့စကားပှောဖို့တောငစြိတမြဝငစြားတော့တဲ့သူဟာ သငြ့ကိုခစွတြဲ့သူဖှစနြိုငြပြါဦးမလား။
သူ့သူငယခြငြွးတှနေဲ့ခငရြငြ မေးကှညြ့ပါ။သငြ့အကှောငြးတှဘောပှောသေးလဲလို့.. မကောငြးတာတှေ၊သငကြခွုပခြယွလြို့စိတညြစရြတာတှပှေောနသေေးရငစြိတမြပူပါနဲ့ သူသငြ့ကိုစိတမြကုနသြေးပါဘူး။သငြ့ကိုလမြးခှဲဖို့ဆုံးဖှတထြားပှီိးတဲ့သူကတော့ စကားထဲကိုထညြ့ပှောတော့မှာမဟုတလြို့ပါ။ အမှနတြကယစြိတပြှတသြှားပှီဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။
သူ့စိတကြလှနဆြှဲနတောပါ။ သငြ့ကိုသဈစာရှိခငွတြဲ့စိတရြယြ၊မခစွတြော့တဲ့စိတရြယြ။ဒါမှမဟုတြ သူသငြ့ကိုမခစွတြော့ဘူးဆိုတာကိုသူ့ကိုယသြူမသိသေးတဲ့အခှအနေလညြေးဖှစနြိုငပြါတယြ။ဘယလြိုပဲဖှစဖြှစသြငြ့အပေါမြှာစြိတမြရှညတြော့ဘူး အရငကြသညြးခံခဲ့တာလေးတှကေိုတောငြ အပှစကြှီးတစခြုလိုမှငနြပှေီဆိုရငတြော့ သူသငြ့ကိုလမြးခှဲတော့မှာသခွောပါတယြ။
သူကလမြးခှဲမယြ့အြရိပအြယောငတြှပှလေို့သငကြ desperate ဖှစပြှီး ဆှဲထားလိုကမြယဆြိုတာနဲ့သငကြအောကရြောကသြှားပါပှီိ။ဒါကှောငြ့ သူ့အနနေဲ့သငြ့ကိုလကခြုပထြဲကရလေို မှောကလြိုမှောကလြှနလြိုလှနလြုပတြော့မှာဖှစပြှီး လုံးဝကိုလေးစားမှုရှိတော့မှာမဟုတပြါဘူး။ တကယလြို့မှသနားလို့ဆကတြှဲတယဆြိုရငလြညြး သငကြတစဘြဝလုံးအောကစြညြးကဖှစနြတေော့မှာပါ။ သူသငြ့ကိုလိုအပတြာထကြ သငကြသူ့ကိုပိုလိုအပနြမေိတာကိုး။
သငြ့ခစွသြူကဆရာကှီးဆိုရငတြော့ သငြ့ဘဝဟာမတှေးရဲစရာပါပဲ။သူကသငြ့ကိုသိပခြစွတြဲ့ပုံပှပှီးခစွလြှနြးလို့ပါဆိုတဲ့အကှောငြးပှခကွနြဲ့သငြ့ကိုခွုပခြယွတြာတှအပှေစရြှာတာတှေ၊သူငယခြငြွးတှကှေားထဲမှာသဝနတြိုတာတှလေုပပြှီးစိတအြနှောကအြယှကတြှတရေစပပြေးတော့မှာဖှစပြှီး သငကြ မခံနိုငတြော့လို့လမြးခှဲစကားပှောတော့မယဆြိုရငြ သူဆငတြဲ့အကှကထြဲဝငသြှားတော့မှာပါ။ သူကသငြ့ကိုသိပခြစွပြမယြေ့ သငကြသူ့ကိုထားခဲ့တာပါပေါ့။သငကြပဲလူဆိုးမကှီးပေါ့။ For the record, you are the one who teared his heart apart and obviously he’s the victim.ပေါ့။ ဒီ့ထကဆြိုးတဲ့သူဆိုဒီထကမြှငြ့တဲ့အကှကတြှလောဦးမှာပါ။ ဒီကိဈစတှကသေိပကြိုခကခြဲနကနြဲပါတယြ။သတိပေးလိုကပြါတယနြော။ ဂုဏသြတငြးကွောဇြောတဲ့ ဆရာကှီးတှကေိုမတှဲပါနဲ့။
ဒီအခကွတြှကတေော့ သငြ့ကိုမကှာခငလြမြးခှဲပှီးထားပစခြဲ့တဲ့သူတှပှေုလုပတြတတြဲ့အခကွတြှပေါ။ သငကြတော့ တကယခြစွတြာဖှစပြှီး လမြးခှဲဖို့မှူတစမြှုနစြာလောကမြှမတှေးမိရငတြောငြ သူတို့ဘကမြှာသငြ့ကိုဘယနြှစလြပဲတှဲမယဆြိုတာ စီမံကိနြးခထွားပှီးသားဖှစရြငဖြှစြ မဟုတရြငလြညြး သငနြဲ့တှဲနရငြေးနဲ့မှ အကှောငြးတစစြုံတစရြာကှောငြ့ လမြးခှဲဖို့စိတကြူးပေါလြာတဲ့အခါ အမွားစုက ဒီအခကွတြှအတေိုငြးလုပလြရှေိ့ကှပါတယြ။ သူတုို့ကလမြးခှဲစကားမပှောခငြ ကိုယကြအရငပြှောပှီး ကိုယနြဲ့မထိုကတြနတြဲ့သူတှကေိုပွောပြွောကြှီးလမြးခှဲထားပစခြဲ့နိုငကြှပါစေ။ Fighting!!!!!!! Aja Aja! Parshar!